बीमा तथ्याङ्क फोटो - Beemapost.com
बीमा तथ्याङ्क फोटो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा सूचीकृत जीवन बीमा कम्पनीहरुले अपरिष्कृत वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नेप्से सूचीकृत हाल ११ कम्पनीहरुमध्ये नेपाल लाइफको अग्रता नै कायम रहेको छ । फुयुचर प्रोभिजनको कारण नेपाल लाइफको खुद मुनाफा घटेको...
काठमाडौं । हाल नेपालमा संचालनमा रहेका १९वटै जीवन बीमा कम्पनीमध्ये नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल (एलआईसी नेपाल) नेपालमा स्थापित र ठुला जीवन बीमा कम्पनीमा रुपमा हेरिर्ने गरिन्छ । तीन वटै जीवन बीमा कम्पनीहरुले...
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको कुल बीमाशुल्क ९० प्रतिशतले बढ्यो, अन्य सूचक यस्तो देखियो ?
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले कुल बीमाशुल्क गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा ९० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको पहिलो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले...
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको खुद बीमाशुल्क आर्जन ५८ प्रतिशतले बढ्यो, जीवन बीमा कोषमा कति ?
काठमाडौं । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ । पहिलो त्रैमासको अवधिसम्ममा कम्पनीले आफनो बीमा कोषलाई मजबुत बनाएको छ। यस त्रैमासको अवधिसम्ममा कम्पनीले आफनो जीवन बीमाकोष १०८ प्रतिशतले वृद्धि गर्न...
नेपालमा बीमामा आबद्ध कूल जनसंख्या